एडविन भ्यान डेर होवेन - ध्यान, संवेदनशीलता, मध्यमता
"सम्पूर्ण यसको अंशहरूको योग भन्दा बढी हो"
परीक्षा लिनुहोस् र आफैंमा पत्ता लगाउनुहोस्
मिडिटेशन र कन्सिसियस
(नि: शुल्क) अभ्यास डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई आफैं अनुभव गर्नुहोस्
तपाईंको सपना साकार गर्नबाट तपाईंलाई के रोकिरहेको छ?
आत्म अभिव्यक्ति र सृजना
तपाईंको आत्माले बोल्ने भाषा पत्ता लगाउनुहोस्
नदेखिने संसारसँग सञ्चार
म आशा गर्दछु कि तपाईले खोज्नु भएको कुरा यस साइटमा पाउनुहुनेछ। यो तपाइँले अपेक्षा गरेको भन्दा अलि भिन्न सेट अप हुन सक्छ वा मध्यम वा कोचबाट प्रयोग गरीएको छ। म वास्तवमै क्याप राख्नेमा विश्वास गर्दिन कि यसले अब म एक मध्यम हुँ र त्यसपछि क्रिप्टो उत्साही हुँ। सबै चीज एक आपसमा जडित छ र म जीवनको सबै क्षेत्रहरु बाट प्रेरणा आकर्षित गर्दछ।
म पनि सहभागीहरूसँग यो देख्छु कि मलाई उनीहरूको जीवनमा कुनै समस्याको साथ निर्देशन दिन अनुमति छ। तिनीहरू X मा काम गर्न आउँछन् तर Y लाई वास्तवमै ध्यान दिन सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउँदछन्। कि को उपहार यो हो कि तिनीहरूले आफ्नो जीवनको सबै पक्ष मा सकारात्मक परिणाम अनुभव। र ठीक त्यस्तै! केहि पनि एक अर्काबाट अलग छैन र त्यसैले पूर्ण तस्वीर महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए मात्र हाम्रो जीवन पूरै फूल्न सक्छ।
हामी सबै यसका अंशहरूको योग भन्दा बढि छौं! एक व्यक्ति को रूप मा, एक सम्बन्ध मा, आफ्नो परिवार संग वा आफ्नो साथीहरु र सहकर्मीहरु संग।
फेसबुक-fLinkedIn twitter मध्यम Pinterest Youtube
ITunes को माध्यमबाट सुन्नुहोस्
Spotify मार्फत सुन्नुहोस्
Deezer को माध्यमबाट सुन्नुहोस्
योजना बी - Bitcoin हाम्रो भविष्य
एडविन को हो?
ध्यान र चेतना
2 ध्यानका आधारभूत रूपहरू
Brainwave Entrainment को साथ राम्रो ध्यान गर्नुहोस्
पूर्णिमाको गुनगुना साथ चिकित्सा उपचार
बौद्ध धर्म बाट मन्त्र
पद्मसंभवबाट "वज्र गुरु" मन्त्र
हाम्रो ईथरिक शरीरको cha चक्रहरू
Sacral चक्र अनुनाद ध्यान
गला चक्र अनुनाद ध्यान
तेस्रो आँखा चक्र अनुनाद ध्यान
क्राउन चक्र अनुनाद ध्यान
HSP - उच्च संवेदनशील धारणा
एक उच्च संवेदनशील व्यक्तिको5विशेषताहरू
के तपाई अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति हुनुहुन्छ? Hsp परीक्षा लिनुहोस्
कार्यस्थलमा उच्च संवेदनशीलता
अत्यधिक संवेदनशील कर्मचारी को5प्रतिभा
एक मध्यम परामर्श बुक गर्नुहोस्
स्पष्ट-संवेदी धारणा मार्फत प्रमाण प्रदान गर्नुहोस्
ट्रान्स को माध्यम बाट चिकित्सा, बोली र कला
एडविन भ्यान डेर होवेन CSNU, एक अध्यात्मवादी माध्यम
सम्पर्क र दरहरू
तपाईंको किनमेल कार्टमा कुनै उत्पादनहरू छैनन्
एडविन भ्यान डेर होवेन - HSP / उच्च संवेदनशीलता, आध्यात्मिकता र मध्यमता
जसरी बौद्धहरूले भनेका छन्: सबै मानिसमा एउटा चीज समान छ र त्यो हो 'खुशीको लागि खोजी'। खुशीको परिभाषाको धेरै व्यक्तिगत अभिव्यक्तिहरू छन्; अधिक पैसा, राम्रो देखिन्छ, एक मीठो पार्टनर, सफलता, राम्रो स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, रचनात्मकता र यस्तै।
तपाईं आफैं वा आफैं भित्र खुशी खोज्न सक्नुहुन्छ।
पश्चिमी विश्वका धेरै व्यक्तिहरू बाहिर बाहिर खुशीमा ध्यान केन्द्रित गर्दछन्, तथापि, अनुभवले देखाउँदछ कि यसले सामान्यतया अस्थायी सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ र तपाईले अर्को क्लिकको लागि छिटो खोज्न थाल्नुहुन्छ। यो जब तपाईं भित्री खुशी खेती गर्नुहुन्छ जब तपाईंसँग छ हुनुको अवस्था त्यो मायालु र ऊर्जावान छ, तपाइँको ध्यान केन्द्रित राख्दछ र व्यक्तिगत सफलताको लागि प्रेरणा प्रदान गर्दछ।
म तपाइँको बाह्य परिस्थितिहरू तपाइँमा पूर्ण रूपमा छोडिदिन्छु। म खुशीको भित्री खेती, मद्दत र तपाईंको भावनाको भाषालाई प्रशिक्षण दिन मद्दत गर्न खुशी छु।
अधिक थाहा छ? तपाईं सहि आउनु भएको छ ... प्रेमको साथ, एडविन
व्यक्तिगत कोचिंग २० € / २min मिनेट
के तपाइँ काममा कुनै चीजमा भाग लिनुहुन्छ, आफ्ना भावनाहरू बारे कुरा गर्दा समस्या छ वा तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत वा आध्यात्मिक विकासको साथ केही समर्थन चाहानुहुन्छ? म तपाईलाई ऐनामा दर्साउँछु, तपाईलाई तपाईको आराम क्षेत्रबाट धक्का दिन्छ जहाँ आवश्यक हुन्छ र तपाईलाई सकारात्मक र रचनात्मक तरिकामा हेर्नका लागि मद्दत गर्दछ।
मध्यम परामर्श २० € / २min मिनेट
एक माध्यमको रूपमा, SNU द्वारा प्रमाणित, म अंग्रेजी तरीकाको आधारमा सल्लाह दिन्छु। यसको मतलब यो हो कि तपाईले फोटो वा गहना जस्तो वस्तुहरू ल्याउनु पर्दैन। म एक आध्यात्मिक व्यक्तिबाट कुराकानी गर्न चाहेको व्यक्तिसँग सम्पर्क राख्छु र कुनै श doubts्का हटाउन सकेसम्म धेरै प्रमाणहरू प्रदान गर्दछु।
आध्यात्मिक उपचार २० € / २min मिनेट
आफैंको लागि आध्यात्मिक उपचारको प्रबुद्ध प्रभाव अनुभव गर्नुहोस्। एक उपचार को लागी २ takes मिनेट लाग्छ जुनमा मैले आध्यात्मिक संसारमा ट्युन इन गरिनको लागि निको हुन।
दरमा छुटको बारेमा जानकारी यहाँ फेला पार्न सकिन्छ.
Bitcoin र ट्रेडिंगको आध्यात्मिकता
27 सेप्टेम्बर, 2020
आध्यात्मिकता र पैसाको मामिलाहरु कहिलेकाँहि एक अर्कामा बाझिन्छन्। यस पहिलो भिडियोमा मँ भन्छु कि तपाईं साच्चै तपाईका बारे धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं स्टक वा क्रिप्टोमा व्यापार गर्नुहुन्छ। यसले तपाईलाई धैर्य, फोकस, भय, रणनीति र अन्य धेरै गुणहरू बारे सिकाउँदछ जुन तपाईंलाई जीवनमा ठूलो प्रयोग गर्न सक्दछ।
उदारता संकटको समयमा प्रवाह गर्नुपर्छ
29 अप्रिल, 2020
पैसा पानी जस्तै छ र स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ। मानिस यस निरन्तर बार्टरमा केवल एक मध्यवर्ती स्टेशन हो। त्यसकारण, उदारता खेती गर्नुहोस् ताकि तपाईं प्रकृतिलाई यसको कार्य गर्न दिन सक्नुहुन्छ।
साँचो धर्म भनेको भरोसा हो
8 अप्रिल, 2020
आत्मविश्वास एक अन्त कहिल्यै नहुने खुशीमा अभिव्यक्त हुन्छ कि सबै कुरा जे भए पनि राम्रो हुन्छ। अब तपाईले गर्न सक्ने सबै जीवन बारे सचेत हुनु हो।
संवेदनशीलता रचनात्मक जीवनको लागि तपाईंको टिकट हो
हाम्रो संवेदनशीलता उच्च आवृत्ति र चेतना र जीवनको आयामहरू अनुभव गर्ने एक माध्यम हो। तपाईं केमा ट्युन गर्नुहुन्छ? हाम्रो चेतना जति उच्च हुन्छ, हामी हाम्रो जीवनमा आकार दिन सक्षम हुन्छौं। यस तरिकाले तपाईं एक सुन्दर र रचनात्मक जीवन जीउन तपाईंको संवेदनशीलता प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
के तपाई अत्यधिक संवेदनशील हुनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईंको मस्तिष्कले अधिक संवेदी जानकारी प्रक्रिया गर्दछ र तपाईं यसमा थप गहिरो रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नुहुन्छ। तपाइँको संवेदी अनुभव अधिक तीव्र, अधिक जटिल, अधिक अराजक छ र तपाइँ नयाँ वा बिभिन्न रूपमा द्रुत केहि अनुभव गर्नुहुन्छ; तपाईं औसत व्यक्ति भन्दा बढि उत्तेजित हुनुहुन्छ.
तपाईंको संवेदनशीलताको गन्तव्यमा आइपुग्नुहोस्
तपाईं उत्सुक र अधीरता को पूर्ण हुनुहुन्छ
HSP को हो वा के हो?
Frequently प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
ध्यान र जागरूकता
जब एक चेतना विकास को बारे मा बोल्छ तब ध्यान एक 'चेतना को राज्य'। यस अर्थमा चेतनाको अवस्थाले हामीलाई परम्परालाई पार गर्छ जसले हामीलाई यसलाई प्राप्त गर्ने विधिहरू दिन्छ हुनुको अवस्था आउनु धेरै बर्षहरूमा मैले यसैले प्राय: निर्दिष्ट परम्पराहरू सिकाएको छैन, तर चेतनाको ध्यान गर्ने अवस्था प्राप्त गर्ने विधिहरू। थप रूपमा, म मन्त्रहरूलाई मन्त्रहरूको रहस्यवादी शक्ति अनुभव गर्न मन्त्र गर्दछ म तिनीहरूको आफ्नै मन्त्र सिर्जना गरेर वा प्रयोग गरेर, उदाहरणका लागि, पद्मसंभवबाट वज्र गुरु मन्त्र.
किन पूर्णिमाको साथ ध्यान गर्ने?
पूर्णिमा ध्यानले हामीलाई उच्च आत्मसँग जडान गर्ने अवसर दिन्छ। जब हामी हाम्रो भावनामा बढी पाउँछौं र हाम्रो भावनाहरू ठाउँ पाउन सकिन्छ।
के तपाईं मनन गर्न सिक्न चाहनुहुन्छ? प्रयास गर्न रोक्नुहोस्!
के तपाईं सचेत हुनुहुन्छ कि तपाईं सक्रिय ध्यान दिईरहनुभएको छ वा निष्क्रिय रूपमा वा तपाईंलाई १ 15 मिनेट वा आधा घण्टा बस्न पर्याप्त चुनौतीपूर्ण लाग्छ?
€4.99 €0.00 किनमेलमा टोकरी
€4.99 €2.49 किनमेलमा टोकरी
पहिले आफूलाई राख्नुहोस्
तपाईंको व्यक्तिगत दृष्टि के हो तपाईंको दर्शन? के तपाईंको काम तपाईंको खुशी, तपाईंको घर, तपाईंको शौक, तपाईंको साथी र परिवारको लागि महत्त्वपूर्ण कारक हो वा तपाईं अनुभवहरू खोज्दै हुनुहुन्छ ... के तपाईंलाई यात्रा गर्न मनपर्दछ र के तपाईं निरन्तर नयाँ चीजहरू खोज्न चाहानुहुन्छ? मेरो विचारमा त्यहाँ सही वा गलत उत्तर छैन, तर त्यहाँ एक मात्र सही उत्तर छ; हजुरको आफ्नै। के तपाई आफ्नो सपना बाच्दै हुनुहुन्छ? वा तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कसरी र कहाँबाट सुरु गर्ने। हुनसक्छ यी लेखहरूले तपाईंलाई केही प्रेरणा दिन सक्छन् ... एक सुरुवात।
तपाईं खसे पछि उठ्नुहोस् र हिंड्न जारी राख्नुहोस्
8 सेप्टेम्बर, 2019
विगतलाई छोड्नु भनेको तपाईंले के गर्नु भएको हो। अब तपाईले के सेवा नगर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईको पछाडिको धूलो अर्कोपट्टि खोजी गरेर फेरि उठ्ने प्रतीक्षा नगरेसम्म ड्रप हुन्छ। कुनै चीज समान हुँदैन, कसैको लागि किन यो तपाईंको लागि भिन्न हुनु हुँदैन। तसर्थ, फेरि उठ्नुहोस् र हिड्नुहोस्, तपाईंको जीवनको साथ जानुहोस् र शोकका लागि जारी नगर्नुहोस्। आफैलाई उदासी महसुस गर्न दिनुहोस्, तर राहत पनि एक क्षणको रूपमा हेर्नुहोस्।
जीवन को पहेली
प्रत्येक प्रशिक्षण, कार्यशाला वा तपाईले गर्नु भएको पाठ्यक्रम पजलको अर्को टुक्रा जस्तै हुन्छ। तपाइँ फेरि केहि सिक्नुहुन्छ, तपाइँ आफैंमा हेर्न चाहनुहुन्न भन्ने केहि चीजको सामना गर्नुहुन्छ र तपाइँ फेरि केही बढ्न सक्नुहुन्छ। यसैले मेरो मार्गनिर्देशन अन्तिम गन्तव्य होईन, यो जीवनको पजलबाट अर्को टुक्राहरूको खोजी गर्नु जस्तै हो।
तपाई कुन ऊर्जा लाई आकर्षित गर्नुहुन्छ?
3 फेब्रुअरी, 2020
तपाईंको राशि चिन्हले तपाईको जन्म हुँदा ऊर्जाको प्रभावको बारेमा केहि भन्छ। तपाईंको राशि चिन्हले सुरूवात बिन्दुको रूपमा काम गर्दछ! यस ब्लगमा म वर्णन गर्न चाहन्छु कि यी ताराले कसरी तपाईंलाई व्यक्तिमा प्रभाव पार्न सक्छ।
तपाईं कहिले आफूलाई भेट्न आउनुभयो?
आध्यात्मिक विकास भनेको ठूलो चित्रको बारेमा हो र आत्म-अनुभूतिले कुनै विकल्प छोड्दैन! तपाईं आफैंमा भेट्नुभयो र यो सधैं सजिलो वा रमाईलो हुँदैन किनकि तपाईं आफैंको अंशहरू आउँनुहुन्छ, आफैमा, यो विरोधाभासपूर्ण हुन सक्छ।
मध्यमशिप स्पष्ट संवेदी धारणा को लागी एक प्राकृतिक क्षमता हो जसको साथ तपाई मृतकको चेतना संग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् >
भूत कथाहरू जुन विश्वास अनुभवमा पुर्‍याउँछ
22 जनवरी, 2020	कुनै प्रतिक्रियाहरू छैनन्
आध्यात्मिक संसार बौद्धिक छ र कसरी र कहिले ध्यान दिने जान्छ। तपाईलाई विश्वास गर्न होइन, तर विश्वासलाई झुक्याउनको लागि ताकि तपाईं जीवनको चमत्कारको लागि अझ खुल्ला हुनुहुन्छ।
आनन्द धर्म हो!
नोभेम्बर 21, 2019	कुनै प्रतिक्रियाहरू छैनन्
'एक' धर्म होइन, तर खुशी धर्म हो! मलाई तपाईको बारेमा थाहा छैन, तर जब म मेरा साथीलाई भेट्छु यसले मलाई खुशी पार्दछ।
एडविन भ्यान डेर होवेन CSNU
एडविन अ by्ग्रेजीले हुन् अध्यात्मवादीहरूको राष्ट्रिय संघ (SNU) का लागि प्रमाणित;
प्रशिक्षण माध्यमहरु को
उहाँ सीआरकेबीओमा शिक्षकको रूपमा दर्ता हुनुहुन्छ।
गोपनीयता र अधिकारहरू
कुकी विवरण (EU)
कुकी विवरण (अमेरिका)
समाचार पत्र प्राप्त गर्नुहोस्
Website यस वेबसाइटमा जानकारी ठूलो सावधानीका साथ कम्पाइल गरिएको छ, जे होस् अझै सँधै त्रुटिहरू वा गलत हुन सक्छ; यसबाट कुनै अधिकार प्राप्त गर्न सकिदैन।
संग बनाइयो ❤ by थपिएको मान - एडविन भ्यान डेर होवेन
V भुक्तान गर्नुहोस्
यस पप-अप खोल्नको लागि शीर्ष दायाँ मेनूमा यो प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्
यहाँ तपाईंको दैनिक ध्यान सुन्नुहोस्
यो ध्यान पनि यसमा फेला पार्नुहोस् हामी सबै एक (we-are-one.io)
धेरै मानिसहरु संग नि: शुल्क छ क्राउन चक्र अनुनाद ध्यान पूर्णिमाको साथ ध्यान गर्न डाउनलोड गरियो। के तपाईंलाई थाहा छ चन्द्रमाको स्थान चक्रसँग सम्बन्धित छ? र यसैले त्यहाँ different विभिन्न प्रतिध्वनि ध्यानहरू छन्, प्रति चक्र एक।
यो पप अप संग सम्बन्धित ध्यान देखाउँदछ चन्द्रमाको वर्तमान स्थिति.
HSP र संवेदनशीलता
मलाई अधिक जानकारी पठाउनुहोस्